Pet Comb Vagadziri & Vatengesi | China Pet Kukama Fekitori
Imbwa Kushambadzira Rake Comb
Iyi imbwa yekugadzirisa rake muzinga ine inotenderera isina simbi mazino inogona zvinyoro-nyoro kubata jasi rinomhanya zvakanaka kuburikidza nematehwe fur pasina kubatika uye kuita chipfuwo chako kusagadzikana.
Pini dzeiyi imbwa yekushongedza rake kamu inogadzirwa nemativi akapoteredzwa kuitira kuti irege kukuvadza kana kukwenya ganda remhuka yako.
Izvo zvinhu zveiyi imbwa yekugadzirisa rake muzinga ndeye TPR. Iyo yakapfava kwazvo. Inoita nguva dzose kuzama kuri nyore & kudekara.
Yapedziswa neburi rakachekwa pamagumo akabatwa, imbwa yekugadzirisa rake mizinga inogona zvakare kusungirirwa kana zvichidikanwa.Iyo inokodzera mhando refu dzebvudzi.
Cat Nhata Comb
1.Mapini eiyi katsi nhata anoumbwa nemakombero akapoteredzwa kuitira kuti irege kukuvadza kana kukwenya ganda remhuka yako.
2.Soft ergonomic anti-slip grip yeiyi katsi nhata inoita kuti nguva dzose kuzama kuve nyore & kudekara.
3.Iyi katsi flea muzinga zvinyoronyoro inobvisa yakasununguka bvudzi, uye inobvisa tangles, mapfundo, nhata, dander uye yakavharirwa tsvina.Iye zvakare zvikomba uye kukwiza muviri kwejasi rine hutano, kuwedzera kutenderera kweropa uye kunosiya zvipfuwo zvako zvipfeko zvakapfava uye zvinopenya.
4.Kupedzwa nechero rakatemwa pamagumo akabatwa, katsi nhata dzinga dzinogona kuturikwa kana zvichidikanwa.
Tsika Imbwa Kushambidzika Comb
Tsika Yembwa Yekushambadzira Machechi uye kukwiza muviri kwejasi rine hutano, Inowedzera kutenderera kweropa uye inosiya jasi rako rechipfuwo rakapfava uye richipenya. Muzinga wedu wakakwana kupedzisa uye kufefetera.
Yakasimba-isina isina simbi mazino ane denderedzwa, haizokuvadze chipfuwo chako. Mazino akapfupika evhudzi rakakomberedza maziso echipfuwo, nzeve, mhino, uye nzvimbo dzemakumbo.Mazino akapamhama evhudzi rakapfava pamuviri mukuru.
Ergonomic mubato neisina-kutsvedza yerabha pamusoro, kupfeka pane yakasarudzika imbwa yekugadzirisa muzinga kunodzivirira tsaona dzinotsvedza kukuchengetedza iwe & chipfuwo chako kuchengeteka.